सबैभन्दा धेरै धन भएका १० अभिनेत्रीहरु: हेर्नुहाेस कसको सम्पत्ति कति ? – Post Patrika
मुख्य पृष्ठ /Intresting/सबैभन्दा धेरै धन भएका १० अभिनेत्रीहरु: हेर्नुहाेस कसको सम्पत्ति कति ?
प्रिति जिन्टा पनि पैसाको मामलामा कोही भन्दा कम छैनन् । उनको सम्पति ३० मिलयन डलर को नजिक भएको एक रिपोर्टमा जनाइएको छ । प्रिति आजभोलि फिल्मबाट टाढा नै छन् तर पनि पैसाको मामलामा कम छैनन् । अभिनयको अलावा प्रिति पंजाव किंग्स एलेभेन को धनी पनि हुन् ।**भिडियो हेर्न तल क्लिक गर्नुहोला **